5 Koorsooyinka Naqshadeynta Sawirka oo Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Gaar ahaan kuwa bilaabaya inay xiiseeyaan nashqadeynta iyo kuwa dhameystiraya farsamadooda, maanta waxaan kuu sooqaatay xulasho yar oo ah shan koorso naqshadeynta garaafka ah. Waxaan isku dayi doonaa inaan soo jeediyo xulashada nuucaan ah si isdaba joog ah, waan ogahay in mararka qaar ay muhiim tahay in la helo habab waxbarasho oo wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay!
Koorsada Adobe Photoshop: Barnaamijka ugu iibinta badan taariikhda naqshadeynta garaafka. Waxaa loo adeegsaday naqshadeynta websaydhka, isdabamarinta sawirrada ... Haddii aadan wali baran barnaamijka, koorsadani waxay kaa caawin kartaa wax badan inaad kasbato aqoon.
Koorsada MX ee Freehand: Macromedia FreeHand (FH) waa barnaamij kumbuyuutar oo loogu talagalay abuurista sawirro iyadoo la adeegsanayo farsamada farshaxanka vector. Sababtaas awgeed, waxay leedahay codsiyo ku dhowaad dhammaan aagagga naqshadeynta garaafka: aqoonsiga shirkadaha, bogagga websaydhka (oo ay ku jiraan animations Flash), calaamadaha xayeysiinta ...
Koorsada rashka: Fireworks waa barnaamij loogu talagay soo-saareyaasha webka si loo abuuro is-dhexgal websaydh iyo boggag tusaalooyin ah. Barnaamijku wuxuu awood u leeyahay inuu dhexgalo waxyaabaha kale ee Adobe sida Dreamweaver ama Flash.
Aasaaska aasaasiga ah: (Hadday shaqeyn weydo, tag xiriirka soo socda www.acamica.com/cursos/13/fundamentos-del-diseno) Maxay yihiin saldhigyada ay ku saleysan tahay qaabeynta qaabdhismeedka? Koorsadan fudud, baro inaad fikrad ugudubto xaqiiqo ahaan jawi garaafyeed ujeedo u ah horumarinta websaydhka. Ogaanshaha dhammaan fikradaha aasaasiga ah ee goobtani waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho oo aad xulato qaababka ugu wanaagsan ee boggaaga, xulashada sawirka ugu fiican iyo qaababka qoraalka si loo hagaajiyo adeegsiga goobta.
Hordhaca Adobe Indesign: Adobe InDesign (ID) waa codsi ka kooban bogag dhijitaal ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafyada xirfadeed iyo qaabeeyayaasha qaabeynta. Koorsadan waxaa lagugu baran doonaa deegaanka arjiga waxaadna baran doontaa sida aaladaha aasaasiga ah u shaqeeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » 5 koorsooyin naqshadeynta garaafka ah oo bilaash ah